Ramash kunwar, Author at Prateek Nepal
तनावमा ओली समूह: महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्चको फैसला
June 10, 2021 Ramash kunwar
काठमाडौं– नेकपा एमालेको केपी हारमा ओली समूहलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को झट्का दिएको छ। अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका निर्णयले मान्यता नपाउने फैसला गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णालीका ४ प्रदेशसभा सदस्यालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई आधिकारिक संरचनाको मान्यता दिन […]
काठमाडौँ /सरकारले दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा रोक लगाउने गृहकार्य थालेको छ । घरजग्गा किनबेच दलालीमार्फत भइरहँदा अपेक्षाकृत राजस्व नउठेपछि सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । दलालीमार्फत किनबेच हुँदा करको दायरामा नदेखिएपछि सरकारले एजेन्सीबाट किनबेच व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘संसारभर एजेन्सीमार्फत नै घरजग्गा किनबेच हुन्छ,’ नेपाल राजस्व परामर्श समिति अध्यक्ष […]
काठमाडौँ / प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले बैतडीको भागरथी बल’त्कारपछि ह’त्या प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न दुई कनिष्ठ प्रहरीलाई एक तह बढुवा गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीसहित ५ जनाले नगद पुरस्कार पाएका छन् । तोकिएको जिम्मेवारी पूर्ण निष्ठा र लगनका साथ सम्पादन गरी प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा र गौरव बढाएको भन्दै महानिरीक्षक क्षेत्रीले दुई […]
काठमाडौँ / ‘संसद पुनःस्थापना झेल हो, एमसीसी पास गर्ने ठूलो खेल हो। स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेम विक्रम सिलवालले जनताले व्यापक वि’रोध गर्दै खारेजीको माग गर्दै आएको अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी पास गर्ने शर्तमा संसद पुनःस्थापना भएको आ’रोप लगाएका छन् । एक अनलाइन टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा संयोजक सिलवालले पश्चिमा शक्तीले अब नेपालमा खेल्ने मौका पाउने पाउने […]
काठमाडौँ / नेपाली चलचित्रकी सदावहार नायिका करिश्मा मानन्धरले नेपालमा राजा नै आउनुपर्ने बताएकी छ्न् । उनको भनाईको आसय राजनैतिक दलका नेताहरुले देश डुवाए अब देश बचाउने राजा नै हुन् जस्तो देखिएको छ । उनले फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै यस्तो बिचार ब्यक्त गरेकी हुन् । करिष्माले पछिल्ला दिनमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमबाट असन्तुष्ट हुँदै उक्त बिचार राखेकी […]
January 19, 2021 January 19, 2021 Ramash kunwar
काठमाडौँ / मुलुकलाई उज्यालो दिने व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन्, कुलमान घिसिङ । १८ घण्टाभन्दा बढी लामो समयको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो दिएका कुलमान जति शासकको अप्रिय छन्, त्यत्ति नै जनताको प्रिय र पूज्य छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानको निरन्तरता बहुसंख्यक नेपालीले चाहेका थिए । तर, उनलाई राज्यले दोहो¥याएन र उनको स्थानमा पदपूर्ति पनि गरिएको […]
नेकपा ३ टुक्रा भएकै बेला रामचन्द्र पौडेल निवासमा देउवाको ईन्ट्री, देशभरका कांग्रेसीहरुमा छायो खुसीयाली !
काठमाडौँ / नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न उनकै निवासमा पुगेका छन् । सोमबार सभापति देउवा बोहराटारस्थित पौडेल निवासमा पुगेका हुन् । नेकपा विभाजित रहेका बेला चुनाव समेत तय भएको बेला कांग्रेसले पनि आफ्ना गतिविधि विस्तार गर्दै गएको छ । यसबीच सभापति देउवा पौडेल निवास पुग्नुलाई अर्थपूर्ण तरिकाले […]
सुवास नेम्वाङ आफंनै कारणले नराम्रोसंग फसे , प्रतिनिधि सभा यसरी पुनर्थापना गरिँदै.. !
काठमाडौं। संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघ’टन गर्न नमिल्ने भन्दै बोलेको भिडियोले सर्वोच्चको इजलासमा प्रवेश पाएको छ। नेम्वाङले संसद सचिवालयकको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको विषय सोमबारको बहसमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले इजलासमा पढेर सुनाएका हुन्। स्मारिकाको अन्तर्वार्तामा नेम्वाङले विगतको भन्दा अहिलेको संसदीय प्रणाली फरक रहेको र अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघ’टन गर्न नसक्ने बताएका छन्। […]
January 18, 2021 Ramash kunwar
अमेरिकामा रहँदै आएकी ११ वर्षीया भिरसाव्या बोरुन गोनचारोभा एक अचम्म लाग्दो समस्याबाट ग्रसित छिन्। उनको मुटु प्राकृतिक रुपमा हुने ठाउँ भन्दा फरक ठाउँमा छ। सामान्यतया मुटुलाई करङ्गले ढाक्ने भएपनि उनको मामलामा भने मुटु फरक ठाउँमा छ। उनको मुटुलाई एकदमै पातलो छालाले मात्र ढाकेको छ। उनको मुटुलाई बाहिरैबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ। डाक्टरहरुका अनुसार यस्तो अवस्थालाई ‘पेन्टालोगी […]
काठमाडौं । भारतको हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकाले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच भएको भेटवार्ताको तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ । पत्रिकाले छापेको तस्वीरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दुई हात जोडेर शिर निहुराएर रक्षामन्त्री सिंहलाई ढोगेको देखिएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका मन्त्री ज्ञवालीको सो तस्वीरलाई पत्रिकाले महत्व दिएर छापेको छ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता […]